कुन नेताका छोराछोरी कहाँ छन ? नेतापुत्रको विदेश मोह हेर्नुहोस् कसका सन्तान कहाँ ? « Naya Bato
कुन नेताका छोराछोरी कहाँ छन ? नेतापुत्रको विदेश मोह हेर्नुहोस् कसका सन्तान कहाँ ?
जनताका छोराछोरी रोजगारीका अभावमा अहिलेपनि दैनिक सयौको सङख्यामा पासपोर्ट बोकेर खाडीको लाईनमा छन । शिक्षामा बिद्यमान बिकृतिले जनताका छोराछोरीलाई सामुदायिक स्कुलमा पढाउँदा निजी क्षेत्रमा पढ्ने विद्यार्थीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने कमजोर शिक्षाप्रणालीका शिकार छन । सरकारी शिक्षामा गिर्दो गुणस्तर र निजी स्कुलमा पढाउन खर्चले धान्नै नसक्ने अप्ठेरो अवस्थामा आम अभिभावक पुगेका छन् । तर, यो पीडाले नेताहरु र तिनका छोराछोरीलाई पटक्कै छोएको देखिँदैन । यस्ता बिकृतिकावीच आम नागरिकको मनमा एउटा कौतुहलता जागिरहेको छ । नेता किन देश बनाउनुको साटो बिदेश ताक्दैछन । के सोच्दैंछन आफ्नै सन्तानको भविष्यबारे ? कुन नेताका सन्तान कहाँ छन ? आउनुहोस यही विषयमा चर्चा परिचर्चा गरौँ ।
१. नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाका छोरा वीरध्वज के गर्दैछन् ?
नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा एक प्रखर नेताका रुपमा चिनिएका सभापति देउवा विद्यार्थी अवस्था देखिनै राजनीतिमा हाबी हुँदै आएका हुन् । उनी वैवाहिक जीवनमा गाँसिनु अघि नै कांग्रेसको केन्द्रीय राजनीतिमा उदाईसकेका थिए । यसो त नेपालको राजनीतिमा महत्वपूर्ण पद गृहमन्त्री बनेपछि आर्थिक रुपमा सम्पन्न परिवारकी आरजु राणासँग बिहे गरेका थिए देउवाले । उनका अहिले एकमात्र सन्तान छन । छोरा वीरध्वज देउवा । छोरा वीरध्वजलाई बुवा शेरवहादुरले गरेका राजनीतिक निर्णयको कुनै असर पर्दैन । उनी बेलायतमा राजनीतिशास्त्र विषयमा विद्यावारिधि गरिरहेका छन् । डडेल्धुरा असिग्राममा सम्पन्न परिवारमा जन्मिएका देउवाको बुढानिलकण्ठमा ठूलो घर छ । वीरध्वजलाई अहिले बुवाले गरिरहेका कुनैपनि राजनीतिक निर्णयको प्रवाह नै छैन । बरु बेलायतमा बेला बेला लभको फण्डा मच्चाएर पछिल्लो बिरध्वज निक्कै चर्चामा आउन थालेका छन ।
विदेशी यूवतीको प्रेममा परेपछि परिवारमा समेत खैलाबैला मच्चिएपछि प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु केही समयअघिमात्रै बेलायत पुगेर समस्या सल्टाएर फर्केकी थिईन । नेपालमा उत्पन्न समस्याले देउवा र उनको परिवारलाई छुँदैन । चौथोपटक प्रधानमन्त्री भईसकेका देउवा आफैले पनि सत्ताको आडमा अकुत सम्पति आर्जन गरिसकेका छन । यसबाहेक राजनीतिमा समेत काँग्रेसको अग्रभागमै रहकी आरजुले विभिन्न गैरसरकारी संस्थामार्फत अकुत आम्दानी गर्ने गरेको उनिनिकट बताउछन । देउवा परिवार वास्तवमै सम्पन्न छ ।
हरेक राजनीतिक छलफलमा सहभागी हुने कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको परिवारलाई पनि खान लाउन कुनै समस्या छैन । राजनीतिमा गुटै गुटको पेलानमा परेका पौडेल तनहुँको मध्यमवर्गिय ब्राह्मण परिवारबाट नेपाली राजनीतिमा आएका हुन । अघिल्लो एकदशक नेताहरुको हालीमुहालीमा चलेको नेपाली राजनीतिमा केही महत्वपूर्ण पद सम्हालेका पौडेल पनि अहिले आर्थिक रुपमा सम्पन्न मानिन्छन । बालाजुको बोहोराटारमा सुन्दर बंगलासहित बसेको पौडेल परिवारले केही महिनाअघिमात्रै बगंलासँगै पूर्वउत्तर मोहोडाको खाली जमिन पार्किङका लागी भन्दै खरिदेको चर्चा छ ।
देश बनाउने भन्दै जनताका छोराछारी आन्दोलनमा होमेर त्यसको नेतृत्व सम्हाल्ने पौडेलका एक मात्र पुत्र चिन्तन पौडेल अहिले बेलायत भासिएका छन् । सुशिल कोईराला नेतृत्वको सरकारका पालामा चिन्तन निक्कै आर्कषक तलव सुविधा लिनेगरि गरिब घरपरिवार पहिचान बोर्डका कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त भएका थिए । पहुँचकै आधारमा नियुक्त पौडेलपुत्र चिन्तनले अपेक्षित नतिजा दिन नसक्दा कोईराला नेतृत्वको सरकार हटेसँगै पदमाबाट पनि हट्नुप-यो । लामो समय बिदेशमा बसेर फर्केका पौडेल नेपाल फर्केकोमा धेरैको वाहिवाहि पाएका थिए । बिडम्वना पद गुमेसँगै उनी बेलायत फर्किएका छन । एक छोरासँगै चार छोरी समेत रहेका रामचन्द्र पौडेलका छोरीहरुमध्ये एक छोरी अमेरिका बस्छन भने अन्य तीन छोरीहरु नेपालमै छन । जेठी छोरीको चितवनमा सम्पन्न परिवारमा विवाह भएको छ । इन्जिनियरसँग बिहे गरेकी माईली छोरी पोखरामा बस्छिन् । एउटा छोरी नेपालकको एक वाणिज्य बैंकमा कार्यरत छन ।
३. नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाका छोरा श्याम अमेरिका :
नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला नेपालको राजनीतिमा अधिकांश समय लाभको पद सम्हाल्ने नेतामा पर्छन । अहिलेसम्म काठमाण्डौमा आफ्नै घर नदेखाएका भएपनि व्यापारीको एक बंगालामा शानका साथ निशुल्क बस्दैं आएका छन ।
चण्डोलमा एक व्यवापारीले निगाह बक्सेको घरमा भाडा निशुल्क बस्दै आएका भएपनि सिटौलाले नितिगत तहमा व्यपारीलाई उल्टासुल्टा ठुलै गुन लगाउदैं आएको चर्चा छ । कानुन व्यवसायबाट राजनीतिमा आएका सिटौलाका दुई छोरी र एक छोरा छन् । छोरा श्याम सिटौला बाबु कृष्ण प्रसाद सिटौलाको सेटिङमा भारतीय दुतावासमार्फत बिनाशुल्क भारतको महंगो बिश्वबिद्यालयबाट ईन्जिनियरिङ संकायको अध्ययन सकेका छन् ।
पछिल्लो समय अमेरिकामा एमई तहको अध्ययन गरिरहेका श्याम अमेरिकामै सेटल हुन चाहेको उनिनिकट बताउछन । त्यसो त सिटौलाका दुई छोरीहरु पनि अमेरिकामै बसोवास गर्दै आएका छन् । सधैं सत्ताको शक्तिमा छाईरहने सिटौलाले विभिन्न ठाउँमा ठुलो रकम जग्गा जमिन जमिनमा लगानी गरेका छन् भने अमेरिकामा समेत माटो सम्पति जम्मा गरिसकेको स्रोत बताउछ । उनका छोराछोरीलाई नेपालमा हुने कुनैपनि राजनीतिक प्रभावले असर गर्दैन् ।
४. बिमलेन्द्र निधीका दुईटै छोरा ईन्जिनियर :
कांग्रेसका प्रभावशाली नेता एवं वर्तमान सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिका दुई छोरा छन् । निधिका जेठा छोरा अबिरल १२ कक्षासम्म जावलाखेलस्थित सेन्ट जेभियर्समा पढिसकेपछि उनी अहिले भारतीय दुतावासमार्फत मोटो सुविधा लिएर भारतको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयमा पढेका छन् । निधिका कान्छा छोरा पनि सोही माध्ययमबाट ईन्जिनियरिङ अध्ययनको लागि भारतमै छन ।
उनको एक छोरा र एक छोरी छन् । तर दुवै जना नेपालको राजनीतिबाट भने टाढा बस्दै आएका छन् । उनीहरु दुवैजना डाक्टर हुन् । छोरी छालाको डाक्टर हुन, भने छोरा अष्ट्रेलियामा बसेर विद्यावारिधी गर्दैछन् ।
६. पूर्व प्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका छोरा व्यापारी :
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमालेका पूर्व अध्यक्ष झलनाथ खनालका एकमात्र छोरा छन निर्भिक चित्रकार खनाल अमेरिकाको अध्ययनपछि अहिले नेपालमै छन् । उनी एमाले निटक युवा संघका केन्द्रिय सदस्यका रुपमा राजनीतिमा रहेका छन् ।
उनी आमाको नाममा रहेको माछापुच्छ्रे हर्बल नामक उद्योग सञ्चालनमा आमालाई सघाउँछन् । यसबाहेक उनी विभिन्न चिनियाँ कम्पनीहरुलाई नेपालमा ल्याई लगानी गराउने र त्यसबापत उनी साझेदारी बन्ने उनको धन्दा छ । उनले विभिन्न ठेक्कामा पनि हात हालेका छन् । उनकै साझेदारीमा भैरहवा विमानस्थल निर्माणको जिम्मा लिएको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीका कारण निर्भिक बेला बेला बिबादमा आउने गरेका छन ।
७. ईश्वर पोखरेलका छोरा नार्कमा :
एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलका दुई छोरा छन् । ती मध्ये जेठा छोरा सिजन पोखरेल कृषि अध्ययन केन्द्र (नार्क) का वैज्ञानिक हुन् । उनी राजनीतिक क्षेत्रबाट टाढा रहेर वैज्ञानिक क्षेत्रको अध्ययन तथा अन्वेषणमा सक्रिय रहेका छन् ।
कान्छा छोरा सिसन पोखरेल अमेरिकाबाट अन्तर्रा्ष्ट्रिय विषयमा अध्ययन गरी फर्किएपनि कहिले नेपाल कहिले अमेरिका गर्ने गरेका छन । बिभिन्न समयमा निक्कै लाभको पद सम्हालेका पोखर्ेलले तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिदाँ हजारौ लिटरको ट्याङकी पैसाले भरेको चर्चा चलेको थियो ।
८. निसन्तान छन् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली :
पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिलेको राजनीतिका प्रमुख पात्र मानिन्छन् । अहिले राजनीतिक निर्णयको प्रभावमा उनको प्रमुख हात रहेको छ । अरु नेताका छोराछोरी विभिन्न पेशा व्यवसायमा लागेपनि केपी ओलीको भने कुनै सन्तान नै छैन । ओली र उनकी श्रीमती राधिका शाक्यबाट सन्तान प्राप्त भएन । छोरा छोरी नभएकाले होला एमालेको युवा राजनीतिमा लागेका केही युवा नेताहरुले केपी ओलीलाई बा भनेर बोलाउँछन् । झापा विद्रोहबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका अध्यक्ष ओलीको भक्तपुर बालकोटमा आफ्नै निजी घर छ । उनको दमक नगरपालिका झापामा समेत घर छ ।
९. माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका छोरा प्रकाश दाहाल बाबुको वरिपरि:
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) का तीन छोरी र एक छोरा हुन् । जेठी छोरीको २ बर्ष अघि क्यान्सरका कारण निधन भएको थियो । माईली छोरी रेणु दाहाल माओवादी केन्द्रमा आबद्ध भई राजनीतिमा सक्रिय थिईन । पार्टीको केन्द्रिय सदस्य समेत रहेकी रेणु लामो समयपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निक्कै चर्चित बनिन् ।
भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर बनेकी दाहाललाई जिताउन प्रचण्डले पुरै राज्यशक्ति मार्फत साम दाम दण्ड भेद गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यसो त रेणु दाहाललाई मेयर बनाउन अन्तिम समयमा दाहालको मन्तान्तर बढेपछि हार्ने डरले मतपत्र च्याँत्न लगाएर पुन मतदान समेत भएको थियो । अर्की कान्छी छोरी विवाह गरेर सामान्य गृहिणी जीवन बिताईरहेकी छिन् ।
प्रचण्डका एकमात्र छोरा प्रकाश दाहालले बाबुको स्वकीय सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । तीनपटकसम्म बिवहा गरेका छोरा प्रकाशका कारण बाबु प्रचण्ड बेला बेला समस्यामा पर्ने गरेका छन् । मध्यम वर्गबाट राजनीतिमा होमिएका प्रचण्डले भूमिगत कालमा प्रवासमा बस्नुबाहेक आफ्ना छोराछोरीलाई अन्य पार्टीका नेताका छोराछोरी जस्तै विदेश पढ्न पठाएनन् । छोरा प्रकाश बाबुका सहयोगी बनेर सघाउँछन् । १० वर्षे जनयुद्धका सर्वोच्च कमाण्डर तथा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने प्रमुख पात्र भएकाले उनको राजनीतिक निर्णयले सिंगो देशलाई नै असर पर्दछ ।
१०. अझैसम्म अविवाहित नै छन् नारायणकाजी श्रेष्ठ :
माओवादी केन्द्रका प्रचण्डपछिका प्रमुख पात्रका रुपमा हेरिएका नारायणकाजी श्रेष्ठ अझैसम्म अविवाहित नै छन् । माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता श्रेष्ठ शान्ति प्रक्रियापछिको राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका छन् ।
उनी माओवादीसँग २०६५ सालमा पार्टी एकता गरेर मुलधारको राजनीतिमा आएका हुन् । राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा उनको विशेष भूमिका रहन्छ । उनले अहिले सम्म बिहे नगरेकाले उनको सहयोगीको रुपमा एक महिला सुसन कर्माचार्यले सहयोग गरिरहेकी छिन् ।
नेपालको राजनीतिलाई प्रभावमा पार्न सक्ने माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले वर्तमान सरकारमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीकोे जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । उनका दुई छोरा र दुई छोरी छन् । जेठी छोरी दाङमा किराना पसल चलाएर बसेकी छिन् भने कान्छी छोरी पनि दाङमै बस्छिन् ।
उनी दाङस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा मानविकी संकायमा स्नातकको अध्ययान सकेकी छिन् । महराका दुई छोरा मध्ये जेठो छोरा एटम महरा माओवादी केन्द्रका केन्द्रिय सदस्य हुन् । उनी सेना समायोजन पूर्व माओवादी सेनाको ब्रिग्रेड कमाण्डर थिए । पछि उनी स्वेच्छिक अवकाश रोजेर राजनीतिमा आएका हुन् । कान्छा छोरा राहुल बुवाको स्वकिय सचिवको रुपमा कार्यरत रहेका छन् ।
वर्षमान पुन अनन्त माओवादी केन्द्रका उदाउँदै गरेका एक प्रभावशाली नेता मानिन्छन् । पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रका हरेक निर्णयमा उनको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । पुनका एक छोरा र एक छोरी छन् ।
उनले दुवै छोरा छोरीलाई सेन्ट जेभियर्स स्कुलमा पढाईरहेका छन् । रोल्पाको सामान्य मध्यमवर्गीय पृष्ठभूमिबाट नेपालको राजनीतिमा आएका पुनकी श्रीमती व्यवस्थापिका संसदको सभामुख ओनसरी घर्ती मगर हुन् ।